GO WITH ME – ခရီးသွား လမ်းညွှန် စာမျက်နှာ – Rangoon – Rangoon – Burma – Tour & Travel – ခရီးသွား | MoeMaKa Burmese News & Media
>New National Flag - Burmese Underground Journal Launched
Phone: +959797 497122
Go With Me is the Travel and Life Style customer reviews page and we focus on customer satisfactory.
Go with me is the review sharing of the services which we receive at the restaurants, hotels, beauty salons, book shops, hospitals and clinics etc.
We aim you to know the true reviews of where you can get good food, which restaurant need improvement in their services. Our emphasis and focus is on the reviews and our friends. We are in the age of consumerism and we need to make wise choice on everything that we consume. We want our friends to make the right choices based on the true information. That is why we started this page and we really wish this page will be helpful for you.
::::::: Sharing with PASSION :::::::
Go with me is the review sharing of the services which we think necessary for all of our friends. The reviews are for the services which we receive at the restaurants, hotels, beauty salons, book shops, hospitals and clinics etc. We aim you to know the true reviews of where you can get good food, which restaurant need improvement in their services. Our emphasis and focus is on the reviews and our friends. We are in the age of consumerism and we need to make wise choice on everything that we consume. We want our friends to make the right choices based on the true information. That is why we started this page and we really wish this page will be helpful for you.
ဒီပေ့ခ်ျကိုထောင်လာတာ နှစ်နှစ်ရှိပါပြီ။ ဘယ်သူ့ဆီကမှ ပိုက်ဆံယူမရေးပါဘူး။ ဆိုင်တွေက ကိုယ်စားတုန်းက ကောင်းနေပေမဲ့ အဲဒီအရသာ သူများ မကြိုက်တာလဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်မစားရင် ဘယ်တုန်းကမှ တစ်ယောက်တည်း ထင်မြင်ချက်နဲ့ မရေးပါဘူး။ သူငယ်ချင်းတွေခေါ်တယ်။ တူတူစားတယ်။ တူတူဝေဖန်တယ်။ ရေးပါတယ်။ ဆိုင်တွေက ဆားဗစ်ကတော့ တော်တော်များများမှာလိုပါတယ်။ လွန်လွန်ကျူးကျူး မဖြစ်ဘူးရင်တော့ ကျွန်မ ဆားဗစ်ညံ့တယ်လို့ မပြောချင်ပါဘူး။ ဥပမာ- မတောင်းပန်ဘဲ ကာစတန်မာကို ရန်တွေ့တဲ့ဆိုင်ဆိုရင်တော့ တမျိုးပေါ့နော်။ Customer Service ဆိုတာကို အပြည့်အဝ နားလည်တဲ့ ဆိုင်တွေမရှိသေးပါဘူး။
ဘယ်ဆိုင်ကမှ ပိုက်ဆံမတောင်းထားပါဘူး။ ကြိုက်တဲ့ဆိုင်မေးလို့ရပါတယ်။ လူကြီးမင်းတို့ မကြိုက်တာကို နားလည်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်မရေးခဲ့သမျှစာအားလုံးကို ဖတ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ အမြဲတမ်း ကောင်းတာကော ဆိုးတာပါ ရေးပေးပါတယ်။ ဘယ်ဘက်မှ မလိုက်ပါဘူး။ ကျွန်မရဲ့ သိက္ခာနဲ့ အကျင့်သီလကိုတော့ မထိခိုက်ပါနဲ့။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
This Ad has been viewed 32021 times.